Rolf waxa uu helay baakad | Verdensbiblioteket
Rolf waxa uu soo qaatay baakad ay hooyadii u soo dirtay. Markii uu guriga u sii socday ayuu roob soo tiixay. Waxa uu orday si aanay baakadda quruxda badani uga qoyin. Laakiin talow maxaa ku jira baakaddan dheer ee dhuuban? Waxa buuggan loogu talagalay da’da ka weyn 6 jir.
Hadiyad roob dalaayad buugaag af fudud ku qoran
presenter regn paraplyer lättlästa böcker